warkii.com » QM oo war kasoo saartay shirka ay maamul goboleedyada ku yeelanayaan Dhuusamareeb
Beesha caalamka oo farriin u dirtay ra’iisul wasaare Rooble
Diblomaasiyiin Mareykan ah oo soo jeediyey arrin cusub oo lagu soo afjari karo dagaalka Al-Shabaab
Sawirro: Muxuu madaxweyne Farmaajo ku sifeeyey ra’iisul wasaare Rooble?
Ciidamo soo gaaray iyo dagaal mar kale laga cabsi qabo inuu Tukuraq ku dhex maro Somaliland iyo Puntland
Ciidan cusub oo gaaray iyo dagaal mar kale laga cabsi qabo inuu ka qarxo Tukaraq
QM oo war kasoo saartay shirka ay maamul goboleedyada ku yeelanayaan Dhuusamareeb
Muqdisho (warkii.com) – Xafiiska Qaramada Midoobe u qaabilsan Soomaaliya ee UNSOM ayaa ka hadlay shirka ay madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya dhowaan ku yeelanayaan magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Galmudug.
UNSOM ayaa barta twitter-ka soo dhigay qoraal ay Qaramada Midoobe kusoo dhaweyneyso shirka ay maamul goboleedyada ku qabsan doonaan Dhuusamareeb.
Qaramada Midoobe ayaa sheegtay in shirka gaarka ah ay yeelanayaan maamul goboleedyada uu hordhac u yahay shirkii uu ku baaqay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee looga hadlayo Doorashooyinka, Xasilloonida iyo dib u eegista dastguurka.
“Xafiiska Qaramada Midoobe wuxuu soo dhaweynayaa shirka ay qorsheeyeen dowladaha xubnaha ka ah Federaalka ee ka dhacaya Dhuusamareeb, kaas oo hordhac u ah shirweynaha dowladda Federaalka iyo Maamul Goboleedyada oo looga wada xaajoonayo arrimaha aas-aasiga ah ee muhiimka u ah qaranka oo ay ka mid yahiin: Doorashooyinka, xasilloonida iyo dib u eegista dastguurka,” ayaa lagu yiri qoraalka.
Hadalka kasoo baxay Qaramada Midoobe ayaa kusoo aadaya xilli Madaxweynayaasha shanta maamul goboleed ay ku heshiiyeen iney 9-ka bishaan ku kulmaan magaalada Dhuusamareeb si ay uga wada hadlaan masiirka siyaasadda dalka iyo sidii ay uga qeyb gali lahaayeen shirka amniga qaranka.
Iyadoo uu jiro saluug siyaasadeed oo ay qabaan madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland ayaa hadana laga dhaadhiciyay iney gaaraan Galmudug si looga wada hadlo arrimo badan iyo sidii loo dar-dar galin lahaa arrimaha doorashooyinka.
Beesha caalamka oo farriin u dirtay ra’iisul wasaare RoobleSeptember 23, 2020
Diblomaasiyiin Mareykan ah oo soo jeediyey arrin cusub oo lagu soo afjari karo dagaalka Al-ShabaabSeptember 23, 2020
Sawirro: Muxuu madaxweyne Farmaajo ku sifeeyey ra’iisul wasaare Rooble?September 23, 2020
Ciidamo soo gaaray iyo dagaal mar kale laga cabsi qabo inuu Tukuraq ku dhex maro Somaliland iyo PuntlandSeptember 23, 2020
Ciidan cusub oo gaaray iyo dagaal mar kale laga cabsi qabo inuu ka qarxo TukaraqSeptember 23, 2020
Aqriso: 8 qodob oo uu ra’iisul wasaaraha cusub sheegay inuu wax ka qaban doonoSeptember 23, 2020
Al-Shabaab ‘oo gacanta ku haya’ ergooyin soo xulaya xildhibaanada 2021September 23, 2020
Al-Shabaab ‘oo gacanta ku haya’ ergooyin soo xulaya xildhibaanada 2020/21September 23, 2020
Xildhibaanada BF oo cod aqlabiyad leh ku ansixiyey ra’iisul wasaaraha cusubSeptember 23, 2020
Deg deg: Xildhibaanada BF oo si aqlabiyad leh ku ansixiyey Ra’iisul wasaaraha cusubSeptember 23, 2020